Ịwa Gowns, ịwa ahụ Pack, ịwa ahụ Drape - Akso
Ịwa Pack & Drape
ụlọ nyocha uwe
Nne & Kids Cares
Abdominal eriri N'ihi Ime Women
Pụrụ ịdabere nrapado teepu si 3M.
Advanced ihe na Anti-static, waterproof ma ọ bụ hydrophilic & Low lint Njirimara.
Soft na Nkasi Obi ike.
Easy traceability nke niile mmiri na mkpọ.
Nye ezigbo nchekwa na ọrịa akara n'oge niile usoro ịwa ahụ.
pụrụ ịdabere Arụmọrụ
Mere nke elu àgwà SMMS.
N'Ụzọ Kwekọrọ AAMI 3 Liquid Barrier Standard chọrọ maka ịwa ahụ gowns.
N'Ụzọ Kwekọrọ ọkọlọtọ arụmọrụ nke Bs EN 13795.
osobo ọkọlọtọ maka Flammability nke Clothing Textiles CPSC16, Klas 1, CFR Part 1610.
Low lint na abrasion eguzogide: ebelata ihe ize ndụ nke lint ofufe ke ọnya.
Kemeghi neckline na red olu nkịtị - nko na loop.
ọcha ma Kasienụ
Taped onuete pụtara a n'ụzọ zuru ezu na-akàrà seam- megide mmiri mmiri na ájá ingress.
Permeation nwalere megide a isi nso nke Chemicals.
Co-extruded ákwà ìhè, nro na-agbanwe imecha.
Ofụri Esịt elasticated enyeghachi ya okpukpu anọ, na nkwonkwo ụkwụ na wrists enye jirichaa nkasi obi na nchebe.
EN1073-2 maka nchedo ájá ahụ nwere ike mmeru na radiations.
EN14126 maka nchedo ndu ịdị egwu na infective mmadụ.
Kwadoo dị na EN1149 mgbochi static ọkọlọtọ.
Alice, nchoputa nke Akso ahụike, onye nna nna bụ a ma ama Chinese dọkịta. O nyere ọtụtụ ndị na ya ọgwụ nkà. Site na nwata, Alice mụtara nna ya na ọgwụ na ahụ ike na-arụ ọrụ na-adịru dịghị akpachapụghị anya.
Alice banyere ọgwụ na ahụ ike ụlọ ọrụ mgbe na-eto eto, na hụrụ Akso ike. Siri, nchebe, dị ọcha ma na nkasi obi na-eso ya niile na-arụ ọrụ. Nke a bụ ịchụso Alice na ya otu. Site imewe, ị na-ahọrọ ngwaọrụ to ...
Akso ahụike specializes na ọgwụ disposables, na-echebe n'uwe, na nonwoven disposable ngwaahịa, dị ka ịwa ahụ draps, gowns, ịwa ahụ ngwugwu, disposable Coverall, iche gown, ihu nkpuchi, akpụkpọ ụkwụ cover, wdg
Tur ịwa gown
Tur ịwa uwe pụrụ ịdabere na kwa ...
GUZOSIENỤ ịwa gown
GUZOSIENỤ ịwa uwe pụrụ ịdabere Arụmọrụ ...
Cleaing Disposable ụlọ nyocha mkpuchi multilayer Spunbon ...
Disposable lab uwe na ọtụtụ-eji maka laborato ...
Disposable Nweghị gown Size Universal qty 50 ...
Anyị iche gowns na-mere nke elu -...
Nchekwa, dị ọcha ma na nkasi obi, ndị a bụ ndị e ji mara anyị ịwa ahụ na ngwaahịa, na
kwa bụ ịchụso anyị otu.
GOODAO @ 2017 Edebere ikikere nile
© Copyright - 2010-2019 : All Rights Reserved. Featured Products - Hot Tags - Sitemap.xml - IGBOB Mobile
Ụkwụ Care plasta , CP Health Care obi Set-Up Pack , Kids White Disposable Coveralls , Beautiful Gowns N'ihi na Na , Kids Disposable Coveralls , Kids Disposable Midia uwe ,